Nwaanyị anyị nọ na Medjugorje na ozi ya na-ekwu maka ndọpụ uche, nke a bụ ihe ọ na-ekwu
Paolo Tescione	Edere ya Ọgọstụ 11, 2020 Ọgọstụ 11, 2020
Machị 19, 1982
Soro Mass dị nsọ nke ọma. Zitere gị ọzụzụ na mkparịta ụka n'oge Mass dị nsọ.
Ozi sitere na October 30, 1983
Gini mere ị hapụghị m onwe gị? Ama m na ị na-ekpe ekpere ogologo oge, mana nyefee m kpamkpam. Nyefee nchegbu gị n’aka Jizọs. Gee ntị n'ihe ọ na-agwa gị na Oziọma: "amongnye n'etiti unu, n'agbanyeghị na o ji ọrụ n'aka, nke nwere ike itinye otu awa na ndụ ya?" Kpeekwa ekpere n’uhuruchi, na njedebe nke ubochi gi. Nọdụ ala n ’ụlọ gị wee kelee Jizọs. Ọ bụrụ n’ịlele igwe onyonyo ogologo oge ma gụọ akwụkwọ akụkọ na mgbede, isi gị ga - ejupụta naanị akụkọ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na - ewepu udo gị. Will ga-ehi ụra wee dọpụ uche gị ma n'ụtụtụ, obi ga na-ama gị jijiji, ọ gaghịkwa adị gị ka ikpe ekpere. Ma n'uzo nka odighi ebe ozo diri mu na Jisos n’ime obi gi. N’aka nke ozo, oburu n’uhuruchi ka fallrara n’udo n’udo na ikpee ekpere, n’ututu, will gha eteta n’obi gi, gakwute Jisos, I kari n’iru ikpegara ya ekpere n’udo.
Nọvemba 30, 1984
Mgbe ị nwere ihe ndọpụ uche na nsogbu na ndụ ime mmụọ, mara na onye ọ bụla n’ime ndụ ga-enwerịrị ogwu nke mmụọ, ahụhụ ya ga-eso ya na Chineke.
Machị 27, 1985
Mgbe obi na-esighị gị ike n’ekpere gị, ị naghị akwụsị, kama ị ga-eji obi gị niile na-ekpe ekpere. Egekwala aru nti, kama chikota na mmuo gi. Jiri ikike ka ukwuu kpee ekpere ka ahụ gị ghara imeri mmụọ ahụ ma ekpere gị bụ ihe efu. Unu niile ndi n’adighi ike n ’ekpere, jirikwa ike dị ukwuu kpee ekpere, lụọ ọgụ ma tụgharịa uche n’ihe ị na-ekpe. Ekwela ka echiche obula duhie gi n’ekpere. Wepu echiche niile, ewezuga ndị jikọtara mụ na Jizọs na gị. Chụpụ echiche ndị ọzọ nke Setan chọrọ iduhie gị ma wepụ m n'ebe m nọ.
Machị 4, 1985
Ndo ma ọ bụrụ na m kwụsị gị rosary, ma ị nweghị ike ịmalite ikpe ekpere dị ka nke a. Na nmalite ekpere a ghaghi itufu nmehie gi. Obi gị aghaghị inwe ọganihu site n’ikwupụta mmehie site n’ekpere onwe ya. Mgbe ahụ bụọ abụ. Naanị mgbe ahụ ka ị ga-enwe ike iji obi gị kpee Chapleti. I mee nke a, rosary a agaghi ada gi n’iru n’ihi na odika o ga adi nani otu nkeji. Ugbu a, ọ bụrụ na ịchọrọ izere ịdọpụ uche gị n'ekpere, wepụ obi gị n'ihe ọ bụla na-anyịgbu gị, ihe niile na-eji nchegbu ma ọ bụ nhụjuanya: site n'echiche ndị dị otu a, n'eziokwu, Setan na-anwa iduhie gị ka ị ghara ime ka ị kpee ekpere. Mgbe ị na-ekpe ekpere, hapụ ihe niile, hapụ nchegbu niile na nchegharị maka mmehie. Ọ bụrụ n ’itinye aka n’echiche ndị a, ịgaghị enwe ike ikpe ekpere. Kpochapụ ha, wepụ ha n'ime gị tupu ekpere. Ma n’oge ekpere, ekwela ka ha laghachikwute gị wee bụrụ ihe mgbochi ma ọ bụ nsogbu nye ncheta ime gị. Wepụ ọbụna nsogbu ndị pere mpe na obi gị, maka na mmụọ gị nwere ike tufuo ọbụna obere ihe. N’ezie, obere ihe esonyere obere ihe ọzọ ma abụọ ndị a ọnụ na-etolite ihe buru ibu nke nwere ike imebi ekpere gị. Kpachara anya, ma hu na o nweghi ihe mebiri ekpere gi na n'ihi nkpuru obi gi. M, dị ka nne gị, chọrọ inyere gị aka. Ọ dịghị ihe ọzọ.
Eprel 7, 1985
Ekwesịrị m ichetara gị ọzọ banyere nke a: n'oge ekpere, mechie anya gị. Ọ bụrụ n’ịnweghị ike imechi ha, lee anya na onyonyo dị nsọ ma ọ bụ obe. Elela ndị ọzọ anya mgbe ị na-ekpe ekpere, n’ihi na nke a ga-adọpụ gị uche. Ya mere elela onye ọ bụla anya, mechie anya gị ma tụgharịa uche naanị ihe dị nsọ.
Ozi akara ụbọchị nke iri na atọ nke ọnwa iri na atọ n’afọ 12
Ọ ga-amasị m inyere gị aka n'ụzọ ime mmụọ mana enweghị m ike inyere gị aka belụsọ ma ị mepee. Dị ka ihe atụ, cheedị echiche, ebe gị na uche gị nọ mgbe a na-eme ụnyahụ ụnyaahụ.
Nke gara aga Post Gara aga post:Nhota iri ise sitere na Chineke ka okwukwe gị sie ike
Next Post → Post ozo:Nraranye a ga-eme kwa ụbọchị na Saint Raphael Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi, mmụọ ozi na-agwọ ọrịa, ọgwụ Chukwu